China Ink Remover BT-300 Emeputa na Supplier | BGT
BT-300 bụ mmiri mmiri maka iwepu agba ọ bụla nke ihe PP na PE na-enweghị okpomọkụ dị mkpa.
Ọ bụ n'ihi eyi na Pee film agbasi ebi akwụkwọ ink mkpochapu.
BT-300bụ mmiri mmiri maka iwepu agba ọ bụla nke ihe PP na PE na-enweghị okpomọkụ dị mkpa. A nwalere ya dabere na ink na-ebi akwụkwọ na akpa ndị a kpara akpa n'ụlọ na mba ọzọ. Ọ nwere ike ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè hichaa elu elu-ebi akwụkwọ ink na ndị ọzọ smudge na-eme ka mmetọ gburugburu ebe obibi na elu nke egweri eyi na Pee ngwaahịa na laghachi dị ọcha na-acha ọcha na agba nke ihe onwunwe.
Enweghị ọdịnaya nke ihe egwu dị ka phosphorus na nitrite wdg.
Ọ dịghị mkpa ịnye okpomọkụ maka ịchekwa ume na ụgwọ ọrụ dị ala.
Ọ dị mma maka mmepụta ihe maka ngwa ngwa ngwa ngwa, ebe ọ bụ naanị naanị 0,5 ~ 1hour chọrọ.
Enwere ike itinye ya n'ọrụ ụwa niile maka akpa niile ma ọ bụ iberibe iberibe.
Enweghị akụrụngwa karịa.
Emere ya na enweghị ihe egwu ma mmiri mkpofu enweghị mmetọ.
Nke gara aga: PITA Akwụkwọ mmado Remote BT-336
Osote: Ngwa anya Brightener OB